Flat Type CNC ခုံစက်စက်ရုံ - China Flat Type CNC ခုံစက်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
ဒစ်ဂျစ်တယ် CNC Turning Center စက် 2800rpm ဗိုင်းလိပ်တံလှည့်မြန်နှုန်း CKI6140
အမည်: Cnc ခုံသုံးစက်တပ်ယာဉ်၏အကျယ် - ၃၄၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ - ၅.၅kwkw ဗိုင်းလိပ်တံ၏အရွယ်အစား - ၇၀ မီလီမီတာအမြင့်ဆုံးအပုဒ် - ၇၅mm မီလီမီတာအမြင့်လွှဲအချင်း - စားပွဲဝိုင်း - ၄၂၀ မီလီမီတာအ ၀ တ်အစား - ၁၂၀ မီလီမီတာမက်စ်အိတ်လွှဲခြင်း - ၂၈၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်ပျံမြန်နှုန်း : 2800rpm အမြီး၏လက် Taper: MT4 အရည်အသွေးမြင့်တရုတ်စျေးပေါပြားချပ်ချပ်အမျိုးအစား cnc သတ္တုဒေါင်လိုက်ခုံစက် CKI-6140 1. စက်ကိုယ်ထည်ပွန်းပဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်မှုနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုအဘို့အညီကိုညီမျှ။ ၂ ။
CKH3628 အလျားလိုက် CNC လှည့်ပြားတပ်ဆင်ထားသောအိပ်ရာ CNC ခုံစက် A2-5 ဗိုင်းလိပ်တံအမျိုးအစား
နာမည်: Flat Bed CNC токခုံစက်ဗိုင်းလိပ်တံအမျိုးအစား - A2-5 ပုံစံ - CKH3628 ဗိုင်းလိပ်တံမှအပေါက် - ၅၀ မီလီမီတာစားပွဲကျော်လွှဲခြင်း - ၄၀၀ မီလီမီတာအမြင့်လွှဲ - ရထား - ၁၆၀ မီလီမီတာအမြင့်ဆုံးအထည်အရှည် - ၃၈၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်နှုန်း: ၃၀၀၀rpm / min CKH3628 အလျားလိုက် CNC လှည့်ပြားပြား - အိပ်ယာ CNC ခုံစက် A2-5 ဗိုင်းလိပ်တံအမျိုးအစား ၁။ X နှင့် ၀ င်ရိုးသည်ထိုင်ဝမ်မှတိကျသော linear rail rail ကိုအသုံးပြုသည်။ အမြန်နှုန်းသည် 20M / min ဖြစ်သည်။ 2. ဝက်အူအမှားအမှားကိုလေဆာ interferometer ဖြင့်လျော်ကြေးပေးသည်။
11kw ဗိုင်းလိပ်တံ Motor ပြားအိပ်ကုတင် CNC ခုံစက်သံမဏိ Headstock ဂီယာ
အများဆုံးထုတ်လုပ်မှုအရှည်: 1500mm ဗိုင်းငင့်မော်တာ: 11kw ဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်း - 45-950rpm Servo Motor ဆက်သွယ်မှု - တိုက်ရိုက်မောင်းနှင်မှု X ဝင်ရိုးအမြန်အစာ: ၆ မီလီမီတာ / မိနစ် Y ဝင်ရိုးတန်းအမြန်ပို့ဆောင်မှု - ၈ မီတာ / မိနစ်ကိရိယာအမြင့်: ၂၅ မီလီမီတာအကျယ် - ၂၅ မီလီမီတာ - ၁၅၀၀ မီလီမီတာအများဆုံးထုတ်ယူခြင်း အလျားလိုက်အမျိုးအစား CNC токарစက် CKI6163 11KW ဗိုင်းလိပ်တံလျင်မြန်စွာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ - ၁။ Threading Inch, Metric, Module နှင့် DP; ၂ ။ တူးဖော်ခြင်း၊ ပျင်းစရာကောင်းခြင်း၊ လေးလံသောအချင်းရှိဘားစတော့များကိုသိုလှောင်နိုင်သည်။ ခ ...
D8 / 250 ဗိုင်းလိပ်တံ Taper Horizontal CNC ခုံစက်3Grade Gear Speed ​​ဒီဇိုင်း
အမည်: အိပ်ရာခင်းအိပ် CNC ခုံစက် CKI6150 ဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်း - ၃ တန်းဂီယာအမြန်နှုန်း - အပြည့်အ ၀ အရှည် - ၃၀၀၀ မီလီမီတာ - ဗိုင်းလိပ်အပေါက်မှတဆင့် - ၈၂ မီလီမီတာအမြင့်စားဇယားကျော်လွှဲ - ၅၀၀ မီလီမီတာသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်း - ၂၉၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ: D8 / 250 လက်မောင်းခရီး - 150mm 3000mm workpiece အရှည် Flat အိပ်ယာ CNC ကိုခုံစက် CKI6150-30001 ။ လေးလံသောဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်သင့်တော်သောရထားကိုကျယ်စေပြီးမြင့်မားသောစွမ်းအား။ လေးဘူတာရုံလျှပ်စစ် tool ကို post3 ။ ဗိုင်းလိပ်တံ၏ဖွဲ့စည်းပုံ - ဂီယာ၏အမြန်နှုန်း3အဆင့်4။ ပုံမှန်ဖွဲ့စည်းမှု: ma ...
250mm Chuck Flat အိပ် CNC ခုံစက်၊ မြန်နှုန်းမြင့်ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်ခုံ
အမည်: အိပ်ယာခင်းအိပ် CNC ခုံစက် CKI6150 ဗိုင်းလိပ်တံ - ၃ တန်းဂီယာမြန်နှုန်း Chuck: D8 / 250 ဗိုင်းလိပ်တံမှအပေါက်: ၈၂ မီလီမီတာအမြင့်စားဇယားကျော်လွှဲ - ၅၀၀ မီလီမီတာမက်စ်ကုန်တင်: ၂၈၀ မီလီမီတာလက်အချင်း: ၇၅mmmm ခရီးသွား - ၁၅၀ မီလီမီတာ ၂၅၅ မီလီမီတာအက္ခရာကုတင်။ CNC токခုံစက် CKI61503Grade Gear အမြန်နှုန်းအသေးစိတ်: ၁။ မြင့်မားသောခွန်အား၊ ရထားကိုကျယ်စေခြင်း၊ လေးဘူတာရုံလျှပ်စစ် tool ကို post3 ။ ဗိုင်းလိပ်တံ၏ဖွဲ့စည်းပုံ - ဂီယာ၏အမြန်နှုန်း3အဆင့်4။ ပုံမှန်ဖွဲ့စည်းမှု - man ...
Thread or Boring အတွက်အလျားလိုက်စီဒီစီလှည့်စင်တာစက် 2000mmmm အရှည်
နာမည်: Flat Type CNC Токခုံစက် CKI6163 ဆုံလည်စင်တာအမြင့်: 254mm အမြီးကားအချင်းအချင်း: 95mm အမြီးကားမောင်းခြင်းခရီးသွားခြင်း - ၂၅၀ မီလီမီတာအမြီးတို့: MT5 တည်နေရာတိကျမှု: 0.01 စုစုပေါင်းပါဝါ: 15kw net အလေးချိန်: 3650 MT5 အမြီး 15KW စုစုပေါင်းပါဝါ Flat CNC токарစက် CKI6163 2000mm အရှည်လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်: ၁။ CKIseries CNC ခုံအစက်သည်ချွေတာသော၊ လက်တွေ့ကျသောစက်ကိရိယာများဖြစ်ပြီးအရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီးအရည်အသွေးကောင်းမွန်သည်။ စက်တွင်အလွန်ကျယ်ပြန့်သောအသုံးပြုမှုရှိပြီးအတွင်းနှင့်အပြင်အတွက်သင့်လျော်သည်။
3000mm Max Processing အရှည်ရှိသည့် Manual 15kw စုစုပေါင်းပါဝါပြားချပ်ချပ် CNC токарစက်
နာမည်: Flat Type CNC Токခုံစက် CKI6163 ဆုံလည်စင်တာအမြင့် ၂၅၄mm အမြီးရိုးအချင်း: 95mm အမြီးကားလမ်း - ၂၅၀ မီလီမီတာအမြီးတို့: MT5 တည်နေရာတိကျမှု: 0.01 စုစုပေါင်းပါဝါ: 15kw net အလေးချိန်: ၃၆၅၀ ပူးတွဲ CKI6163 ပြားအမျိုးအစား CNC токтокစက်အမြင့်ပေ ၃၀၀mm လျင်မြန်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ - 1. နောက်သို့ကွေးနေသောကွေးမုဒ် mode၊ အလွန်အမင်းကြိမ်နှုန်းခိုင်မာစေရန်အသုံးပြုခြင်းကိုလမ်းညွှန်ပေးသောကြောင့်စက်သည်တင်းကျပ်မှု၊ တိကျမှုနှင့်တိကျစွာ retention.2.Uniaxial ဖွဲ့စည်းပုံပုံသေနှင့်အတူ ...
CKI6163 သတ္တုရိုးကွန်ပြူတာသည်စားပွဲကျော် ၆၃၀ မီလီမီတာမက်စ်အချင်းစုံသောအခုံ
စားပွဲကျော် Max Swing အချင်း: 630mm MAx Carriage ကျော်လွှဲအချင်း: 350mm အမြင့်ဆုံးပစ္စည်း: အရှည် 1000mm ဗိုင်းလိပ်တံမော်တာ: 11KW ဗိုင်းလိပ်တံ ဦး ခေါင်းနှင့်ဗိုင်းလိပ်တံ Taper: C-11/1: 20 X / Y ဝင်ရိုးအမြင့် Moving မြန်နှုန်း: 6/8 M / ဗိုင်းလိပ်တံ၏အချင်းမိနစ်အချင်း: 5105 အကျယ်ပြန့်ကျဉ်း: ၃၅၀၀ * ၁၅၀၀ * ၁၇၀၀ မီလီမီတာပြားချပ်ချပ် CNC ခုံစက် CKI-6163 ◆အလျားလိုက်လမ်းညွှန်လမ်းဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဗဓေလသစ်သဲများ၊ မာကျောမှုမြင့်မားခြင်း၊ တိကျသောကြိတ်ခွဲခြင်း၊ gear ဂီယာအုံတစ်ခုလုံးကြီးမားသော aperture အမျိုးအစား ...
Flat Bed CNC Horizontal Lathe Machine, Computerized lathe Machine 250mm Chuck
အမည်: အိပ်ရာခင်းအိပ် CNC ခုံစက် CKI6150 ဗိုင်းလိပ်တံ: ၃ တန်းဂီယာမြန်နှုန်း Chuck: D8 / 250 ဗိုင်းလိပ်တံမှအပေါက်: ၈၂ မီလီမီတာအမြင့်စားဇယားကျော်လွှဲ - ၅၀၀ မီလီမီတာအမြင့်သယ်ဆောင်ရမည့်ရထား - ၂၉၀ မီလီမီတာလက်အချင်း - ၇၅ မီလီမီတာအ ၀ တ်အထည်: 150mm 250mm Chuck Flant Bed CNC ခုံစက် CKI61503Grade Gear Speed1 ။ လေးလံသောဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်သင့်တော်သောရထားကိုကျယ်စေပြီးမြင့်မားသောစွမ်းအား။ လေးဘူတာရုံလျှပ်စစ် tool ကို post3 ။ ဗိုင်းလိပ်တံ၏ဖွဲ့စည်းပုံ - ဂီယာ၏အမြန်နှုန်း3အဆင့်4။ စံဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ: လက်စွဲစာအုပ် chuck5 ။ Opti ...
အမည်: Flat Bed CNC токခုံစက် CKI6150 စားပွဲကျော်လွှဲခြင်း ၅၀၀ မီလီမီတာသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်း - ၂၉၀ မီလီမီတာ X / Z ၀ င်ရိုးအမြန်အစာ - ၆/၈ M / min Servo Motor Connection: Direct Connection Tool Height: 25mm Tool Width: 25mm Tailstock Shaft Taper : MT5 MT5 Tailstock Taper Flant Type CNC токခုံစက် CKI6150 တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှု Servo မော်တာလျင်မြန်စွာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ - ၁။ CKI6150 / 1000/1500/2000 CNC ခုံများမှာစျေးကွက်ရှိ CNC ခုံများအတွက်အဆင့်မြှင့်တင်ထားသောထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။ သာမာန် CNC ခုံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းတို့သည်အဓိကအားဖြင့် ...
၇၅ မီလီမီတာအမြီးတိုပြားပါသောအိပ်ယာခင်း CNC ခုံစက်၊ ကြီးမားသော CNC စင်တာခုံ
နာမတျော: Flat အိပ် CNC ခုံစက် CKI6150 ဆုံလည်စင်တာအမြင့်: 145mm အမြီးကားအချင်းအချင်း: 75mm အမြီးကားမောင်းခရီး - 150mm အမြီးတိုကျည် Taper: MT5 တည်နေရာတိကျမှု: 0.01mm ပါဝါ: 10kw / h အသားတင်အလေးချိန်: 2300kg 75mm အမြီးတိုအချင်းအချင်းစက် CNC ခုံ စက် CKI6150 အမြန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ - ၁။ ၉၈၀TDI CNC စနစ်ကိုကျင့်သုံးခြင်း၊ ရိုးရာ RS-232 မျက်နှာပြင်အပြင်အပြင်ပရိုဂရမ်၏ဂီယာနှုန်းကိုလည်းမြန်စေခြင်း၊ U disk ဂီယာကိုလည်းထောက်ပံ့ခြင်း၊ ငါ ... စစ်ဆင်ရေး
ရေစိုခံသတ္တုနှင့်အတူဗိုင်းလိပ်တံကိုတဆင့် 70mm မီလီမီတာအလိုအလျောက် CNC ခုံကြိတ်စက်
အမည်: အိပ်ရာခင်းအိပ် CNC ခုံစက် CKI6140 ဗိုင်းလိပ်တံ: အမျိုးမျိုးသောမြန်နှုန်းဗိုင်းလိပ်တံ ဦး ခေါင်း - A2-6 ဗိုင်းလိပ်တံဖောက်အားဖြင့် - 70mm X ဝင်ရိုး - ခရီးသွားလာခြင်း - ၆ မီတာ / မိနစ် Z ဝင်ရိုးတန်း - ခရီးသွားလာခြင်း - ၈ မီတာ / မိနစ်အချင်းအချင်း: ၆၅ မီလီမီတာလက်ဝှေ့ယမ်း: 120mm 70mm Spindle Hole Flant Bed CNC ခုံစက် CKI6140 မှတဆင့် Tailstock လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်: ၁။ အရေးပါသောအိပ်ရာဖွဲ့စည်းပုံကိုလက်ခံပါ။ မြင့်မားသောရေထိန်းထားသောအစွန်းသည်စက်ကိရိယာတစ်ခုလုံး၏တင်းကျပ်မှုအားအလွန်ကောင်းမွန်စေပြီးစက်ကိရိယာတွင်ရေစိုခံစွမ်းအားရှိသည်။ ...